UZumba, zumba nokunye okungu-zumba okubhekiswe eRoma | Izikebhe ze-Absolut
U-Ana Lopez | | Ukuhamba ngezinyawo okuncane, Izingqikithi
NgoJuni 2, isikebhe seZumba siqala ukuhamba ngomkhumbi, futhi uma ufuna ukubamba iqhaza kuso kufanele usheshe, ngoba ama-75% wamathikithi angama-350 enikezwe bonke abalandeli balo mdanso asethengisiwe. Le cruise, empeleni i-mini-cruise, izosuka eBarcelona, ​​futhi izobuyela eBarcelona ngoJuni 4, njengoba ifike eRoma phambilini.
Lolu hambo lubandakanya igumbi, ibhodi eligcwele, amakilasi kaZumba kanye nomdanso nezingxoxo zokufundela abantu abadala, amakilasi eZumba ezingane ezineminyaka esukela kwemine kuye kwengu-4, amaqembu amabili nenkulisa.
Njengoba bengisho Phakathi nezinsuku ezimbili zokuwela ungabamba iqhaza emakilasini amakhulu, emibonisweni nasemihlanganweni yokufundisana enikezwa ngabafundisi abayishumi nambili, abaculi nabadansi. Inkampani ehlelayo isiqinisekisile ukuba khona kukadansi uMuhy Arruda, kanye nomculi osemthethweni owenze uphawu lwe-zumba, uBeto Pérez. Abanye abafundisi bangumdidiyeli womdanso wase-Italy uMarti Michel, udokotela wasemadolobheni kanye nochwepheshe we-hip-hop uToni Torres noJon Martin, ogxile esimisweni se-zumbastrong.
Usengayibekisa indawo yakho ngokufaka intengo ngokugcwele noma ngokushiya idiphozi engu-50% yenani eliphelele. Konke okunye kufanele kufakwe ngaphambi kukaMeyi 15.
Umkhumbi okuzokwenzelwa kuwo lo mini-cruise uyisikebhe senkampani yemikhumbi yase-Italy iGrimaldi Line, ethwala abantu abacishe babe ngu-2.800 XNUMX. Lo mkhumbi unamakamelo anomoya opholile angama-411 anendawo yokugezela neshawa, okuzokwabiwa ngokungahleliwe kubahlanganyeli bomcimbi we-zumba, amasudi ama-junior angama-50, amasudi ayi-18 afakwe umbhede ophindwe kabili, ithelevishini kanye ne-mini bar. Futhi emkhunjini kukhona indawo yokudlela eyi-1 à la carte, i-1 self-service, indawo yokudlela, indawo yokubhukuda enebha nendawo yokudlela esheshayo.
Kulezi zikhala kufanele sengeze igumbi lokuphumula elikhulu le-smaila, idisco, ikhasino, ijimu, igumbi lezemidlalo lezingane, izingqungquthela, i-boutique ...
Kepha lokhu okuhlangenwe nakho akukusha ncamashi, ngoba ngonyaka odlule abalandeli nabalandeli bakaZumba bakwazile ukuzwa umlando omkhulu ngoZumba, yize lolu hambo lwalulude. Ungayifunda lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » Izinhlobo zokuhamba ngesikebhe » Izingqikithi » UZumba, zumba kanye no-zumba abaningi babheke eRoma
Isikebhe seMedithera neBaltic Sea esinobungqingili, ukuze ukwazi ukukhetha